फ्लिपकार्टको उदाहरणबाट इ-कमर्स बुझौं !  HamroKatha
फ्लिपकार्टको उदाहरणबाट इ-कमर्स बुझौं !
संयुक्त राष्ट्र संघको एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा अहिले १ करोड ४१ लाखले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यो भनेको कुल जनसंख्याको पुग नपुग ५० प्रतिशत हुन आँउछ । त्यसमा पनि सामाजिक संजाल प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ७१ लाख जति छ ।
हाम्रो कथा २०७६ असार ८ गते १७:०९
तस्वीर श्रोत : Livemint
बंसल दाजुभाईले २००७ मा शुरु गरेको फ्लिपकार्ट डट कमले अहिले इन्डियामा तहल्का पिटिरहेको छ ।
२५ वर्षका विन्नि बंसल र २६ वर्षका सचिन बंसल दुबै जागिरे थिए, तर उनीहरुलाई नयाँ केही गरौं भन्ने लागिरहेको थियो त्यत्तिखेर अनलाइनबाट किताबहरु किन्ने र वेच्ने चलन थिएन । त्यही अभावमा उनीहरुले जुक्ति निकाले, अनलाईन बुक स्टोर खोल्ने ।
शुरुका दिनमा अनलाइनमार्फत किताबहरु बेच्न शुरु गरेका वंसल दाजुभाईले बजार विस्तार गर्दै इलेक्ट्रिकका सामानहरु बेच्न थालेका थिए । त्यसपछि अन्य सामानहरु बेच्दा बेच्दै अहिले सबैजना सामान किन्नको लागि उनीहरुकै भर पर्न थालेका छन् ।
एउटा अर्पाटमेन्टको कोठाबाट ५ सेप्टेम्बर २००७ मा उनीहरुले कम्पनी शु्रु गरेका थिए । अहिले यसको हेर्डक्वाटर बैगलोरमा छ । चार लाख रुपैयाँमा फ्लिपकार्ड शुरु गरे, अहिले उनीहरुको कम्पनी १ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर रेभेन्यु भएको अनलाईन रिटेल कम्पनी भएको छ । जसले २४ घण्टाभित्रमा आफ्नो सामान डेलिभरी दिने गर्दछ । उनीहरुले ग्राहकको विश्वास जित्नका लागि बेचिसकिएको सामान फिर्ता लिने पोलिसी पनि बनाएको छ ।
विश्वकै एक सय वटा भित्र पर्ने फ्ल्पिकार्ट वेभसाइट इण्डियामा टप टेनमा पर्छ ।
भन्न खोजिएको कुरा, अनलाईन मार्फत व्यापार गर्न सकिने संभावना अथाह छ । नेपालमै पनि यसको निकै ठूलो संभावना छ । खासगरि ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता र मिडिल क्लासको उदयसँगै । संयुक्त राष्ट्र संघको एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा अहिले १ करोड ४१ लाखले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यो भनेको कुल जनसंख्याको पुग नपुग ५० प्रतिशत हुन आँउछ । त्यसमा पनि सामाजिक संजाल प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ७१ लाख जति छ ।
१६ घन्टा अगाडि २ मिनेटमा पढिने